China Aviator Sunglass for Men 100% UV Protection Goggle Alloy Frame ukwenziwa kunye nefektri | UBaolai
Izibuko zelanga zeAviator zaMadoda 100% UV woKhuselo lweGoggle Isakhelo seAlloy
1. I-UV400 yokulinganisa iindondo zelanga kubalulekile ukukhusela amehlo akho kumonakalo wexesha elide we-UV kunye nokugcina amehlo akho esempilweni xa uphuma.
2. iihenjisi zesinyithi eziqinisiweyo ezizinzileyo ngokwaneleyo ixesha elide zisebenzisa. Zifanele zonke iimeko zemozulu kunye nemozulu.
3. njengokuhamba, ukuloba, ukuqhuba, ukuya ezivenkileni, ukuhambahamba, ukuskiya, ukuthatha iifoto, kwaye kufanelekile njengesixhobo sefashoni kunye nokunxiba imihla ngemihla entwasahlobo, ehlotyeni, ekwindla nasebusika. Isipho sipakishwe silungile, sisenza ukuba sibe sisipho esihle kodwa esisebenzayo sesipho kubahlobo kunye nosapho!
Into leyo HAYI. 10171-P8590
Ubungakanani 19X10X12 cm
Isinyithi esingenasiphelo: ixesha elide, elinendleko, ukhuseleko lwendalo
Iphedi yentsimbi ekhululekileyo
Izinto zeLens: iPC
-I-lens ye-REVO. Iilensi zeRevo ziyakrwela kwaye zichaphazele ukungqubana kunye nokucaca ngokugqibeleleyo kombono
-UV400 UKHUSELEKO: Imitha eyingozi ye-UV ithintelwe, yimisebe ebonakalayo ebonakalayo enokungena emehlweni akho
-Ukunciphisa ukubonakaliswa komphezulu
-Isakhelo esomeleleyo nesisindayo
-UV iilensi zokukhusela
-Ifashoni kunye noyilo lwesitayile sezibuko ezipholileyo zamadoda nabafazi
Ukuthintela ukonakala, ungaze ucoce iiglasi zakho zempahla, kwaye uphephe nokusebenzisa iisepha. Ukucoca iiglasi zakho zelanga, sebenzisa amanzi kunye nesepha ukunqanda zonke iintlobo zezinyibilikisi okanye utywala. Sebenzisa izincedisi zoqobo kuphela kunye nezinto ezingafakwanga
1 pc / isikhwama sebhegi
Iifayile ezingama-20 / ibhokisi yangaphakathi
Iifayile ezingama-500 / ikhtn
· Sihambisa ngenqanawe kwiintsuku ezingama-25 zomsebenzi wentlawulo, ihlala ikhawuleza
· Iisampulu zithunyelwa kwisithuba seentsuku ezisixhenxe
Ukwaneliseka kwabathengi kubaluleke kakhulu kuthi!
Ukuba unayo nayiphi na ingxaki kwi-odolo yakho, nceda unxibelelane nathi kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuze waneliseke, nceda ungashiyi ingxelo engeyiyo ngaphambi kokuba sisombulule ingxaki yakho.
Siqinisekisa ukuba umba wakho uza kusonjululwa ngokukhawuleza.
Logama nje wonwabile kukuthenga kwakho, nceda usishiyele ingxelo elungileyo.
Ingxelo yakho ibaluleke kakhulu kuthi ichaphazela ukubekwa kwethu kunye nabathengi bexesha elizayo.
Siza kushiya ingxelo eyakhayo kuwe ngokubuyisela ngokuzenzekelayo xa sifumene ingxelo yakho.
Egqithileyo ezemidlalo Iindondo zelanga ezibaleka ukuloba ibhayisekile ngebhayisikile Polarised Sports sungles glass PC half frame 100% UV400 Protection
Okulandelayo: Izibuko zelanga eziCociweyo zaMadoda kunye naBasetyhini iiglasi zelanga Imibala yeeLilitha ze-Mirror 100% UV uvimba